China Ultrasonic Intelligent Automatic ELectricToothbrush EA350 Manufacturer and Supplier | Charmhome
Acoustic vibration dị ọcha teknụzụ: Sonic toothbrush gburugburu na 38000 strok / nkeji mbanye ọmụmụ miri n'etiti ezé gị na tinyere chịngọm akara maka ahụkebe ihicha na wepụ elu 100% mbadamba nkume, whitening ezé gị ma melite gị onu ahụ ike na izu abụọ ka mma karịa akwụkwọ ntuziaka . gbochie chịngọm mgbaji.
Ihe onwunwe ABS, PC
Isi Iyi 2W, USB Nchaji
Typedị Batrị DC 3.7V, Batrị Lithium 1500mAh
Mmiri mmiri IPX7
Nha ngwaahịa Φ29 * 248mm
Nha ịbụ 140g
2.High Ogo Dupont Naịlọn 612 bristle.
3.4 ụdịdị ọrụ (Ọcha, White, Polish, Mmetụta) + 3 Intensites nwere ike họrọ iji hichaa eze.
4.2 nkeji oge na 30 sekọnd nkeji oge ncheta
5.Mgbu 38000 strok / min
6.60-70 ụbọchị oge batrị mgbe oge 7-10 na-akwụ ụgwọ.
7.Peepe agba mmiri pụrụ iche nke elu iji zere ọkọ ma gosipụta agba ndị na-enwu gbaa.
8.Unique akara usoro imewe site onwe anyị, dakọtara na moto na-azọpụta energe.
Kedu ihe kpatara ị ga-eji họrọ ahịhịa ezé eletrik?
1.Acoustic vibration dị ọcha teknụzụ: Sonic brọsh gburugburu na 38000 ọrịa strok / nkeji mbanye ọmụmụ miri n'etiti ezé gị na tinyere chịngọm akara maka ahụkebe ihicha na wepụ elu 100% mbadamba, whitening ezé gị ma melite gị onu ahụ ike na izu abụọ mma karịa a ntu aka. gbochie chịngọm mgbaji.
2.4 AKW -KWỌ AKW MODKWỌ AKW-KWỌ - Ọcha (dị nwayọọ), White (ike), Polish (ike ntụgharị ugboro ugboro) na Milder (nke na-adịghị agbanwe agbanwe) iji kwekọọ n'ọnọdụ dị iche iche nke ezé ezé, yana usoro 3 dị ike, yabụ ị nwere ike ịhọrọ ụdị dị iche iche dị ka mmasị gị na eze na-atụ aro.
3. Otu oge awa 10 zuru ụgwọ ikpeazụ ụbọchị 60 nke ojiji nkịtị (ugboro 2 kwa ụbọchị), ikike batrị kachasị na ahịa na ncheta batrị dị ala ma na-ewepụ ike na-akpaghị aka mgbe ụgwọ zuru ezu. Ọzọkwa, IPX7 na-enweghị mmiri iji mee ihe na bat na ịsa ahụ. Enweghị nchekasị maka mmiri ga-abanye n'ọdụ ụgbọ mmiri na-akwụ ụgwọ iji belata ndụ batrị, Karịrị chaja USB.
Nke gara aga: Batrị nwere ike ịnweta Powered Electronic Sonic Toothbrush EA315
Osote: Square Travel Nha nha nkucha Case CHS001
Baby na ụmụaka mara mma Ultrasonic Electric Chil ...
Rechargeable Battery Kwadoro Electronic Sonic T ...
Electronic Hand Free Ultrasonic Okenye Akpaaka ...
Smart 5 ụdịdị Adult Sonic Electric Nhicha E ...
2020 New rutere Okenye Sonic Electric Toothbrus ...
Intelligent Sonic Electronic Nnọchi Multif ...